Amabhethri e-LiPo: izimfihlo zalawa mabhethri e-lithium | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Amabhethri e-LiPo: izimfihlo zalawa mabhethri e-lithium
Isaka | | Izingxenye ze-elekthronikhi
Kunamabhethri amaningi njengoba usuvele wafunda ngendatshana emayelana nebhethri CR2032. Kufanele futhi ukuthi usuvele wazi ukuthi kunamamojula we-Arduino afana ne- TP4056 okuyinto ethize ukushaja amabhethri. Manje, kule ndatshana entsha uzofunda kabanzi nge LiPo amabhethri. Lokho kusho ukuthi, uhlobo oluthile lwebhethri le-lithium elithola udumo oluningi emakethe kanye no-Li-Ion.
Ngincoma nokuthi ubheke i-athikili ekhuluma ngaye IMAX B6 ishaja yebhethri, kulo ngabhala isigaba mayelana izinhlobo zamabhethri, amaseli nezihlanganisi yamandla kagesi, nomehluko wayo obaluleke kakhulu, izinzuzo nezinkinga. Lokho kungakusiza uqonde ukuthi yini okuzoxoxwa ngayo lapha ngamabhethri e-LiPo.
1 Isingeniso seLithium
2 Amabhethri e-lithium
2.1 LiPo vs Li-Ion amabhethri
2.2 Amathiphu wokunakekela amabhethri e-lithium
3 Thenga amabhethri e-LiPo ngamaphrojekthi wakho
El i-lithium (Li) kuyisici setafula lesikhathi elihambisana nensimbi ye-alkali emhlophe. Inokusha kakhulu, i-ductile futhi ikhanya kakhulu (ngaphezu kwe-aluminium). Iyonakala ngokushesha lapho ihlangana nomoya-mpilo emoyeni, futhi ayikho esimweni esikhululekile emvelweni. Ngalesi sizathu, kufanele icutshungulwe ngemuva kokukhethwa kukho ezimayini.
Akuyona insimbi engajwayelekileNjengoba izingxenye ezingama-65 ezingxenyeni eziyizigidi eziyi-1.000.000 XNUMX XNUMX zoqweqwe loMhlaba yi-lithium. Kepha kulezi zinsuku sekuyigugu kakhulu, njengoba kunjalo nge-coltan mineral, ngenxa yezicelo zayo embonini yezobuchwepheshe, ikakhulukazi ukwenza amabhethri ngayo.
El I-lithium nayo ayikwazi ukucwiliswa emanzini, ngoba lapho ixutshwe nayo ingaphendula futhi ishe, njengoba kwenzeka kuNa. Ngakho-ke, lapho kuthintwa nesikhumba, kungadala ukulimala, ngoba izithukuthuku noma umswakama ovela esikhunjeni ungakhiqiza lokhu kuvutha komlilo. Zonke izizathu ezengeziwe zabakhiqizi bebhethri ukuqinisekisa ukuthi zivikelwe kahle ukugwema izingozi ezingaba khona.
Njengoba ngishilo, enye yezicelo eziphambili ze-lithium yile amabhethri. Kokubili ezimotweni eziningi ezisebenza ngogesi ezifana nezimoto ze-F1, kanye nomkhakha we-elekthronikhi (omakhalekhukhwini, amaphilisi, ama-laptops, ...). Kuyiqiniso ukuthi ayikaze isetshenziswe phambilini, ngoba bezingezinye izinhlobo zamabhethri abefakwe emakethe.
Kepha lapho uthola izakhiwo ze-lithium, njengokushaja kwayo okusheshayo, izinkinga ezinganaki zomphumela wememori owesabekayo nobude bempilo, amandla alo (amandla amancane namabhethri anamandla kakhulu), njll., maduze akwenze waba luhlobo olukhulu lwamabhethri.
Ngaphakathi amabhethri e-lithium akhona imindeni ehlukahlukene okuvelele kwabanye, yize muva nje bezama ezinye izici ezingajwayelekile. Lezi zinhlobo yilezi:
I-Cobalt lithium oxide- Banamandla amakhulu futhi bahlala isikhathi eside, kepha bangeza ukukhathazeka ngokuphepha.
I-lithium-magnesium oxide: Ziphephe kakhulu, kepha ukusebenza kwazo nokusebenza kahle akuhlali kuhle ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi emazingeni okushisa aphezulu.
I-lithium iron phosphate: kungenye yezinto ezihamba phambili maqondana nokuphepha nokuqina isikhathi eside, isekela imijikelezo yokukhipha imali engaphezu kuka-2000.
Li-ion: zingamabhethri e-lithium amasha futhi zinokwakhiwa okuyisilinda noma i-tubular. Banobuningi obuhle, ukuqina nokuphepha.
lipo: Amabhethri e-LiPo yiwo asithandayo kule ndatshana, futhi ayizicaba. Ziyavuseleleka futhi zinezici ezifana ne-Li-Ion.
Labo ozwe kakhulu, ngoba yibo abahamba phambili, yi-Li-Ion ne-LiPo. Lokho kunamanye umehluko ophawulekayo...
LiPo vs Li-Ion amabhethri
Njengoba ngishilo, amabhethri LiPo futhi Li-Ions ziyefana ngezindlela eziningi. Abasebenzisi i-lithium kuphela njengesisekelo, futhi banempilo ende. Okungenani zigcina cishe imijikelezo yokukhokha nokukhipha eyi-1000, yize imvamisa imijikelezo engama-500 ngaphandle koshintsho olubonakalayo ekusebenzeni kwayo.
Ngakolunye uhlangothi, bobabili banakho ukuqina okuhle, Amabhethri anamandla amakhulu futhi anamandla amakhulu angakhiwa ngesisindo esinciphile nosayizi. Yingakho bebekwe kumadivayisi eselula.
Futhi ekugcineni, bobabili babelana ngokubi. Futhi lokho ukulondeka kwabo, ngoba bakwenzile ingozi yomlilo njengoba kubonwe kwamanye amaselula angakhiwanga kahle. Ukugwema izinkinga, akufanele zivezwe amazinga okushisa aphezulu noma.
Kepha umehluko phakathi kweLiPo neLi-Ion:
Li-ion: basebenzisa i-lithium salt electrolyte equkethwe i-organic solvent (uketshezi), okuzoba yiyona enikeza ama-ion adingekayo ukusabalalisa okukhona phakathi kwe-cathode ne-anode ngesikhathi sokukhipha. Le yindlela umehluko ongaba khona owenziwa ngayo ukuze kusetshenziswe amadivayisi axhunyiwe Ngendlela, ngokukhokhisa, inqubo iyahlehliswa futhi ama-ion asuka ku-anode aye ku-cathode.
lipo- Usawoti we-lithium uqukethe ijeli (imvamisa i-polymer), enciphisa amathuba okuchithwa. Zivame ukuguquguquka ngandlela thile, ngakho-ke ziyathakazelisa amamodeli akhubazeka. Inkinga ukuthi ziyasha ngaphezu kukaLi-Ion.
A Izinga Lomsebenzisi, awutholi mehluko. Uzobona ukusebenza okufanayo, amakhono, nezici zomzimba.
Amathiphu wokunakekela amabhethri e-lithium
Amabhethri e-LiPo, njengamabhethri e-Li-Ion, ahlala isikhathi eside njengoba sengishilo, kepha lokho akusho ukuthi akufanele uwanakekele. Ukwenza ukuthi zihlale isikhathi eside, ungazilandela amathiphu alula kakhulu:
Ngaso sonke isikhathi shaja ibhethri lapho ulidinga. Kufanele isuswe kudivayisi ekuqukethe uma kungenzeka noma okungenani icishe idivayisi eyisebenzisayo.
Ukwehlisa ibhethri kumkhawulo akuyona inketho enhle kulezi zimo.
Akudingeki ukuthi ulinde kuze kube ngu-100% ukususa ishaja bese uyisebenzisa uma uyidinga. Umphumela wenkumbulo lapha mncane.
Ungalifaki ibhethri emazingeni okushisa aphakeme, ngoba lokhu kuyawawohloka kakhulu.
Akufanele usebenzise amashaja ukushaja ngokushesha. Lobu buchwepheshe buyashesha futhi busebenziseka, kepha ngokubabeka ekucindezelekeni okukhulu ngenxa yamandla omthwalo, impilo yabo ewusizo iyancipha.
Uma uzogcina ibhethri isikhathi eside ngaphandle kokulisebenzisa (izinyanga ezimbalwa), kufanele uqiniseke ukuthi likhokhiswa okungenani ama-40% noma ngaphezulu.
Kungenzeka ukuthi ngokuswela ukusetshenziswa kwefilimu ye- I-lithium chloride ebonakalayo esigxotsheni esihle sebhethri. Yize lokhu kuvimbela ukusakazwa kwama-electron, akukubi kakhulu, kuyasuswa ngokusetshenziswa.
Thenga amabhethri e-LiPo ngamaphrojekthi wakho
Uma ucabanga ukuthola ibhetri ye-LiPo ukuze uvule amaphrojekthi akho, kufanele wazi ukuthi ungawathola ngezindlela ezahlukahlukene nangokuhlukahluka izici zobuchwepheshe. Ngaphezu kwamandla nokuqina ongakunikeza, idatha ebaluleke kakhulu amandla ayo.
La umthamo wala mabhethri ulinganiswa nge-mAh, okungukuthi, inani le-mA ngehora abangakunika lona. Isibonelo, ibhethri le-1000 mAh linganikezela nge-1000mA ngehora elilodwa. Kepha futhi, ngokwesibonelo, ingahlinzeka nge-2A isigamu sehora, noma isebenze amahora amane iphakela u-4A. Isikhathi sizoncika kulawa manani ...
Kufanele uhlaziye izidingo zamandla zamaphrojekthi wakho bese unquma ukuthi udinga mthamo muni. Nazi ezinye izibonelo ze imikhiqizo ongayithenga ku-Amazon:
1550mAh 14.8V LiPo ibhethri
2200mAh 11.1V LiPo ibhethri
Ibhethri le-5000mAh 14,8V
Ibhethri le-8000mAh 7.4V
Khumbula ukuthi voltage akuyona ebaluleke kakhulu, ngoba ungasebenzisa abalawuli ukuze bakwazi ukuyivumelanisa nalokho okudingayo ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » Amabhethri e-LiPo: izimfihlo zalawa mabhethri e-lithium
U-Arduino Leonardo: konke odinga ukukwazi mayelana nebhodi lezentuthuko
I-WS2812B: umugqa wemilingo we-RGB LED